トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ukuze lithole ukuthi lezi imodeli ukunqoba kusukela isimo yokusebenza umshini pachinko
Amamodeli ukuthandwa e pachinko, akukho imodeli. Kusobala, kodwa lokho eziningi amakhasimende imodeli Popular Hlala. Ngakho, ngokushesha nje lapho lubonakale wangena esitolo pachinko, ngicabanga ukuthi kuba Yebo imodeli ikhasimende has a lot of ehlezi. Thenga yonke isimo yokusebenza, kodwa kuzohluka yi wenkokhelo umbono lonke esitolo, uthi into efanayo mayelana nemibandela yokusebenza imodeli-specific izitolo. Ekhuluma
kuqhathaniswa amakhasimende unamathele onobuhle kahle, kodwa Xintai, Xintai kukhona izinto eziningi ezenziwe esikhathini yokutakula.
Xintai, ngoba kusobala kukhona ukugijima kahle ethandwa, badukiswa ukusebenza Xintai, ngicabanga ukuthi angase angakwazi ukuzamukela, sicela uqaphele ukuthi ngezinye izikhathi bashe lapho Ekuhlaleni obungenza.
futhi, ngaphandle nangaphakathi onobuhle billboard ngendlela ezinzile, ezifana ukubungaza uphinda amakhasimende noma walulama, ngangivame pachinko eshintsha ukuthi asebenza.
Nokho, kukhona emakhazeni pachinko ungenayo kancane ukungena ngemvume onobuhle. Ikhuluma ngalokho okwenzeka Yingakho Esimweni esinjalo, ngoba izinga yokuthola imodeli billboard liphezulu kakhulu. Pachinko emakhazeni ukusebenza kwe-imodeli Akwenele ukucabanga ukuthi onobuhle billboard, thina izinga ngokuvamile nokuvulwa lonke esitolo futhi okusezingeni eliphezulu.
Ngakho, waqale wangena esitolo, ukubona ukusebenza kwe-onobuhle billboard, Iqiniso liwukuthi, yokuthi kubaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kukhona icala lapho kukhona oluqhutshwa imodeli, ezifana kwakukhona Xintai ngaleso sikhathi nalabo bangaphambili ukuthandwa emasontweni ambalwa edlule. Esimweni esinjalo, noma kade kwenzeka imodeli, kodwa athi Xintai nokubonwa igama ukuthi ziwile khona igama lomcimbi, ezifana ukusebenza kwe-up khona uhlobo ukusebenza nokugcinwa angasasekelwa uthole manje, ezinye nail ngokwezinga ungase ube ukulungiswa. Uma kukhona oluqhutshwa imodeli, ezifana wavuselwa
uya khona, kungase kube kuwufanele ahlale. Operating isimo
onobuhle, kungase kuthiwe evumelekile ukuba Nokho, funa onobuhle oluhlose, ezinye amacala sobala uma kukhona iyasebenza Xintai in reverse, ngokusebenzisa Okuhle pachinko emakhazeni ukuhlinzwa kusukela abavamile noma okunye okunjalo, bangase bangabi nakho njengoba izenzakalo ethile, njll, imodeli ufuna hit uma noma Mitsurudai, ukuthi kungase ageleze ngokudlala namanye amamodeli, esitolo evamile lapho ukuba siqonde isimo yokusebenza, uzodinga Sankounisuru.
ngoba kukhona izinto eziningi ukuthi angeke kushiwo ukuthi kukhona ethandwa ngoba ngokungenamibandela kukhona ukusebenza, ngicabanga ukuthi akayona ingozi anqume inhloso ngokuhamba kuphela.
nail ukulungiswa kanye Ukucaciswa, njengoba kubonakala kusukela idatha, nokunye okunjalo engele ahlukahlukene, noma ngoba ngempela welula ukugijima muhle, noma uthenga yonke operation ukuthi kuphela kuzo okusezingeni eliphezulu ngenxa ezinhle, akusona ukuhlonza ngezinga elithile.
ekubukeni evamile kahle ezitolo isimo yokusebenza, njll, zama ukusebenzisa njengoba ngempumelelo ulwazi futhi isimo yokusebenza imodeli. Amakhasimende ukunyakaza, uyophinde abe nozwelo esitolo zabantu. Ngokuhlaziya ukusebenza model, onodaba ukuza futhi ubonise ezifana izitolo obengeziwe umkhuba.